Talk:Bisha Ramadan - Wikipedia
Salaan sare Mudane Kali duul, sxb waxaan kaaga digayaa wareejinta ciwaanka bogaga. Bog waxaad wareejin kartaa kaliya hadii qaabka u qoran yahay khaldan tahay, luuqada ku qoran ajaanib tahay, ama macnaha u qoran yahay Af Soomaali ahayn.
Ereyga "Wikipedia" waxaa loo isticmaalaa kaliya bogaga xeerka iyo sharciga Wikipedia Soomaaliga. Dhamaan bogaga iyo maqaalada kale oo dhan waxaa ciwaan u ah magacooda. Wikipedia:Bisha Ramadan waa khalad, mana waafaqsana xeerka. Xataa caqli ahaan waxaa qurux badan inaan u qorno Bisha Ramadan, sababtoo ah bogaas wuxuu ka hadlayaa Bisha Ramadaan keli ah. Hada dib ayaan u celiyey bogaasi, hadii aad su'aal qabto fariin ii reeb adigoo magacayga isticmaalaha ku daraya qoraalkaaga.
Waad ku mahadsan tahay shaqada aad meeshan ka heyso. Ismail4all (talk) 14:44, 19 Juun 2016 (UTC)
waa runtaa[wax ka badal xogta]
Walaal waad ku mahadsantahay taladaada qurxoon, aqoon darri iima geynine waxaa iiga dhacay gacanta waxaan rabay oo kali ah in ereyga Ramadan aan ka dhigo kaliya Ramadaan oon Shaqalka (a) ku siyaadiyo, ka dib markaan arkay in wikipedia ay hore ka raacdayna waaban soo celin waayay, inaad arkayso waan dareensanaa hadana mahadsanid, tan kale meesha ay ku qorantahay (ka noqo) marmar ma shaqayso maxaa ku dhacay? --Kali duul (talk) 15:14, 19 Juun 2016 (UTC)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Talk:Bisha_Ramadan&oldid=158002"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 19 Juun 2016, marka ee eheed 15:15.